ကဗျာချစ်သူတွေအတွက် တင်ဆက်လိုက်ရခြင်းရယ်ပါ။ ဝေဖန်ချင်သူများ lonelykaunglay147@gmail.com သို့ အားမနာတမ်း ဝေဖန်အကြံပေးနိုင်ကြပါတယ်။
Posted by အောင်မှူးဝေကဗျာများ at 6:23 AM No comments:
သပိတ်စန်းကိုအမေစုအမြန်ဆုံးသွားေ၇ာက်ကယ်တင်ပါ။ ✂✎✂✎✂✎✂✎✂✎✂✎✂✎✂✎✂✎✂✎✂✎ အမေစုရေ . . . . ဥရောပက အပြန်မောတယ်လို့သဘောမထားပါနဲလား၊ လက်ပံတောင်းတောင်ကိုသွားကြည့်ပါဦး၊ လယ်တီသိမ်လည်းကွဲနေပြီလို့ သတင်းကြားတယ်။ဒီကိစ္စတွေကြောင့် သံဃာတော်တွေဟာ၂-၁၁-၂၀၁၃ လက်ပန်တောင်းတောင်ဒေသကျောက်ကြီးတောင်အနီးသပိတ်စခန်းဖွင့်ပြီလို့ ပူးတွဲဓာတ်ပုံပါ သတင်းတွေတွေ့တယ်။ တင်တဲ့သူတွေကတော့ အမေစုရဲ့ Nld အဖွဲ့တွေပါပဲ။ အမေစုကိုယ်တိုင်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့တဲ့ လက်ပံတောင်းတောင် ကိစ္စဟာ အခုအထိ ပြည်သူတွေရင်ထဲ မီးလောင်နေတုန်းပဲဆိုတာ ဘယ်သူ့မှာ အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာ အမေစုသိမှာပါ။ ကိစ္စတစ်ခုကို ပြီးငြိမ်းအောင် ကိုယ်တာဝန် မယူနိုင်ရင် ဥက္ကဌအဖြစ်ခေါင်းဆောင်မလုပ်သင့်ဘူး။ ဒီပုံစံနဲ့ဆို အမေစုမြန်မာ ပြည်၇ဲ့သမ္မတမပြောနဲ့ ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဆင့်တောင်လုပ်လို့မရနိုင်ဘူး ဆိုတာ သားတို့သဘောပေါက်တယ်။ ပြည်သူတွေရင်ထဲမှာ အမေစုသမ္မတဖြစ် ဖို့မဖြစ်ဖို့ထက် . . . (၁) သယံဇာတတွေမဆုံးရှုံးဖို့ (၂) မြန်မာနိုင်ငံကိုနိုင်ငံခြားသားတွေမအုပ်ချုပ်နိုင်ဖို့ ဆိုတဲ့ အချက်ကိုသာလျှင် ပဓာနထားနေကြတာဆိုတာ အမေစုရင်ဘတ်ထဲထည့် ထားပါ။ ဟိုးတုန်းကလို ပြည်သူဟာ မရူးတော့ဘူးနော် . . . (၁)အာဏာရှင်မကောင်းကြောင်းကိုလည်းသိတယ် (၂)အမေစုမကောင်းကြောင်းကိုလည်းသိတယ်။ ဒါလေးမှတ်ထားပြီး လက်ပံတောင်းတောင်ကိစ္စကို ပြီးငြိမ်းအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ အမြန်ဆုံးထိုသပိတ်စခန်းကိုသွားရောက်သင့်ပါတယ်။ ☀အလင်းရှင်☀
Posted by အောင်မှူးဝေကဗျာများ at 9:00 PM No comments:
Posted by အောင်မှူးဝေကဗျာများ at 8:58 PM No comments:
အသက် ၂၀ အရွယ် ဘရာဇီးကျောင်းသူအပျိုစင်ဘ၀ ပန်းဦးဆွတ်ခွင့် လေလံတင်ရောင်းချပွဲမှာ ဂျပန်နိုင်ငံ က Ronald Densetsu (Natsu ) အမည်ရ အမျိုးသားက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၈၀, ၀၀၀ နဲ့ ရယူသွား ပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဘရာဇီး ကျောင်းသူ မစ္စ Catarina Migliorini က သူ့ အပျိုစင် မိန်းမသားဘ၀ကို အင်တာနက် အွန်လိုင်း စနစ်နဲ့ လေလံ တင်ရောင်းချခဲ့တာပါ။
ဘရာဇီး ကျောင်းသူ မစ္စ Catarina Migliorini
သြစတေးလျ လူမျိုး ရုပ်ရှင် ဒါရိုက်တာ Justin Sisely ရဲ့ “Virgins Wanted” ဆိုတဲ့ မှတ်တမ်း ရုပ်ရှင်ကား ရဲ့ အစိပ်အပိုင်းအနေနဲ့ Catarina Migliorini ရဲ့ အပျိုစင် ပန်းဦးဆွတ်ခွင့်ကို ဈေးပြိုင်တင်ခဲ့တာ မှာ ဈေးပြိုင်ပေးခဲ့တာ ၁၅ ခု တောင် ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အသက် ၂၀ အရွယ် သူ့ အပျိုစင်ဘ၀ကို ၀ယ်ယူခဲ့သူ ဂျပန်အမျိုးသားကို သူ့အနေနဲ့ အမေရိကားနဲ့ သြစတေးလျ ခရီးစဉ်မှာ လေယာဉ်ပေါ်မှာ ပေးဆပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ပေးစပ်မှု မပြုမီနဲ့ ပေးဆပ် အပြီးကိုလည်း အင်တာဗျူး ပေးမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ ပန်းဦးပျော်မွေ့မှုကိုတော့ ရုပ်ရှင် ရိုက်ကူးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အခု လေလံနိုင်သွားသူ ဂျပန်အမျိုးသားဟာ အမေရိကန်က Jack Miller နဲ့ Jack Right တို့ရဲ့ ဈေးပြိုင်ပေးမှုကို လည်း ကျော် လွှားနိုင်ခဲ့သလို ဈေးပြိုင် အမြင့်ဆုံး ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အိန္ဒိယ က Rudra Chatterjee ကိုလည်း ကျော် လွှားပြီး ပေးနိုင်လို့ အခုလို လေလံအောင်ပွဲ ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဆင်းရဲတဲ့ မိသားစုတွေအတွက် အိမ်တွေဆောက်ပေးဖို့ ငွေကို အသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်လို့ မစ္စ Catarina က ပြောပါတာကို The Australian News ယနေ့ အောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်နေ့သတင်းတခုမှာ ဖော်ပြ ထားပါတယ်။
Posted by အောင်မှူးဝေကဗျာများ at 8:52 PM No comments:
Posted by အောင်မှူးဝေကဗျာများ at 8:49 PM No comments:
Posted by အောင်မှူးဝေကဗျာများ at 8:47 PM No comments:
ရွှေစုန်းချောင်းဆရာတော် — with Ye Oo and 54 others.
4Unlike · · Unfollow Post · Share
You, မယ် စီ, Ye Oo, Juliet Sein and 37 others like this.
Aung Myin ဒီ နေ့ တော့ သီ လ တွေ ရ ချင် ပါ တယ် အို ကေးးးးးးး!
Lupa Aung အွမ် သူ့ကျ တစ်နှစ်ကျော်နေတဲ့ ဆောင်းပါး နာ့ပေးပီးတော့ေိေိ။
Aungko Lat ခ်ခ်ခ်
Hero Rose ဘာတစ်နှစ်ကျော်လဲကွဟင်:-)
Posted by အောင်မှူးဝေကဗျာများ at 8:36 PM No comments:
အောင်မှူးဝေကဗျာများ. Travel theme. Powered by Blogger.